Mashandisiro Ekushandisa Vhidhiyo yekushambadzira Yako Madiki Real Estate Bhizinesi | Martech Zone
Unoziva here kukosha kwekushambadzira kwevhidhiyo kune iripo pamhepo yako real estate bhizinesi?
Hazvina mhosva kuti iwe uri mutengi kana mutengesi, iwe unoda anovimbwa uye ane mukurumbira brand chiziviso kukwezva vatengi. Nekuda kweizvozvo, makwikwi ekutengesa zvivakwa anotyisa zvekuti haugone kusimudzira bhizinesi rako diki.
Neraki, kushambadzira kwedhijitari kwakapa mabhizinesi eese saizi ine akawanda anobatsira maficha ekuwedzera kwavo chiziviso. Vhidhiyo kushambadzira inzira yakakosha mukushambadzira kwedhijitari uye inobatsira kune ese maindasitiri, kunyanya zvivakwa.
Kana iwe uchida kudzidza kumwe kushambadzira kwevhidhiyo nyore-kushandisa matipi ekuvandudza yako diki real estate bhizinesi, ramba uchiverenga ichi chinyorwa.
Sarudza Zvinangwa Zvako Uye Funga Zano Saizvozvo
Kutanga, iwe unofanirwa kuziva kuti haugone kutanga kugadzira mavhidhiyo pasina chero zvinangwa uye zvirongwa. Vhidhiyo kushambadzira ibasa rinodhura uye rinotora nguva uye inoda zano rakanyatsojeka.
Usati watanga kushambadzira vhidhiyo, tora nguva yako kuona zvinangwa zvako uye nekufunga zano rekuzvizadzisa. Iwe unofanirwa kuziva izvo chaizvo zvaunoda kuzadzisa uye kana iwe uchikwanisa kusvika kune ako aunoda mhedzisiro.
Heano mamwe maitiro chaiwo aunogona kufunga nezvawo:
Nhamba yekuonekwa kwemavhidhiyo ako pamwedzi
Kuti unzwisise kutsamwa kunonzwisisika kweizvi, ungangoda kuita yemakwikwi kutsvaga kuti uone mhedzisiro yevanokwikwidza zvivakwa.
Paunotarisa zvinangwa zvako, unogona kuronga chirongwa nenzira kwayo. Edza kuvaka zano rakasimba uye unamatire pairi. Ehezve, sezvo iwe uri wekutanga, ungangoda kumwe kudzokororwa mumatanho epakati.
Gadza Kunze Bhajeti Yechokwadi
Nhanho inotevera ndeyekufungidzira huwandu hwemari yaunoda kuti uite yako real estate vhidhiyo kushambadzira zano.
Iyi nhanho inofanirwa kuve nechokwadi nezve mhando yemavhidhiyo ako. Rangarira kuti kugadzira mavhidhiyo anoyevedza kunoda maturusi mazhinji, uyezve, unofanirwa kuisa parutivi bhajeti yakakwana.
Haufanire kuora moyo kana usingakwanise kutenga bhajeti yakati wandei; unogona kutanga nemavhidhiyo akagadzirwa pamba uye yemahara yekugadzirisa vhidhiyo software.
Edza kudzidza matipi e DIY ekugadzira mavhidhiyo kudzikisa mutengo. Iwe unogona zvishoma nezvishoma kuenda kune ekutanga maturusi uye mamwe emawadhi emavhidhiyo ebhizinesi rako.
Tsanangura Chimiro Chakasiyana
Inokurudzirwa zvakanyanya kuve neyakasiyana dhizaini mune yako digital kushambadzira, kunyanya mumavhidhiyo ako. Kugadzikana muiri dhizaini kunobatsira vateereri vako kukuziva iwe mushure mechinguva.
Maitiro ako, kusanganisira mavara, matauriro ezwi, mhando yekutaura nyaya, nezvimwe, zvinomiririra hunhu hwako. Edza kutsanangura chimwe chinhu chinotonhorera kukwezva vateereri vako. Iwe unogona kunyange kuwana mhinduro kubva kune vateereri vako kugadzirisa yako vhidhiyo maitiro.
Iwe unogona zvakare kutsanangudza theme yekudya kune ako enhau midhiya zvinyorwa. Zvinoreva kuti kana mushanyi akaona chikafu chako, iwo mapositi ane dingindira rose. Iyi inzira yakanaka yekubata pfungwa dzevateereri pakushanya kwekutanga. Semuenzaniso, iwe unogona kuona inotevera feed theme pa Instagram:
Sezvauri kuona, izvo zvinyoreso zvinoita zvitaera zvese pamwechete. Unogona kugadzirisa misoro dzakasiyana dzeako edzimba yekutengesa vhidhiyo.
Hunhu Hwako Real Estate Vhidhiyo
Izvo zvave zvichiratidzwa kuti kana iwe uine hushamwari iwe uchitaura nevateereri vako, iyo yepamusoro yekubatanidzwa mitengo iwe yaunowana.
Izvi zvinotonyanya kukosha kana zvasvika pakutenga uye kutengesa macondos kana dzimba. Kuva neimba ndechimwe cheakanakisa zviitiko zveunhu zvinosanganisira zvinonakidza manzwiro uye maitiro.
Saka iwe unofanirwa kuisa aya manzwiro mumavhidhiyo ako uye utaure nyaya dzako uchifunga nezvese matambudziko evateereri vako.
Semuenzaniso, edza kunzwira tsitsi vateereri maererano nemitengo yakakwira uye inflation. Zvichitaurwa zviri nyore, iwe unofanirwa kugadzirisa mavhidhiyo ako epamba kuti vashanyi vatende kuti uri kufunga saivo.
Sarudza Mapuratifomu Akakodzera Ekushambadzira Vhidhiyo
Iwe unofanirwa kuziva kuti yega yega dhijitari chiteshi ine yayo vateereri, saka iwe unofanirwa kugovera ako mavhidhiyo pamapuratifomu ayo akakodzera kune real estate.
Semuenzaniso, LinkedIn inzira inoitirwa basa ine hukama, uye vazhinji nyanzvi dzezvivakwa vane maakaundi pavari. Nekuda kweizvozvo, zvakanaka kuti iwe ugovane mavhidhiyo ako papuratifomu.
Wepamusoro masocial media mapuratifomu senge Facebook, Instagram, uye Twitter zvakakosha kune yako vhidhiyo kushambadzira. Semuenzaniso, Instagram ine akawanda anobatsira maficha ekushambadzira kwevhidhiyo senge maficha ezvipfuyo, Nhau, Mamoyo mavhidhiyo, IGTV, uye Reels. Iwe unofanirwa kuita zvakanakisa kubva pane izvi maficha kuti uwane iyo yakawanda yekuburitsa inogoneka.
Ronga Yako Real Estate Mavhidhiyo
Mavhidhiyo ane chikamu chakakura chehuwandu hwemagariro evanhu. Mazhinji emavhidhiyo aya akagadzirwa nemhando, saka zvakakosha kuti iwe uende kumberi kwevakwikwidzi vako.
Vashandisi vari kubhombwa nehuwandu hwemavhidhiyo, uye mukana wako wekuwanikwa wakaderera kwazvo. Imwe nzira yekuwedzera yako kuoneka uye kuisa ako mavhidhiyo mumaziso evamwe vashandisi ndeye kuronga.
Iwo epamusoro maawa epamhepo panguva iyo vazhinji vevanhu vari kushandisa vezvenhau mapuratifomu anosiyana nepuratifomu uye zvakare neindasitiri. Semuenzaniso, yakanakisa nguva yekutumira pa Instagram yakasiyana ne Twitter.
Saka iwe zvirinani ushandise zvemagariro midhiya kuronga maturusi kutumira panguva yakanakira yako indasitiri uye uwane yakanyanya kubatanidzwa mitengo yemavhidhiyo ako.
Heino muenzaniso wekuronga kushandisa Boka moto:
Regedza iro Simba reZvipupuriro
Brand mukurumbira kiyi yekukurudzira tarisiro yekuve vatengi vako. Nzira inobatsira yekuita izvozvo ndeyekutendera vatengi vekare kuti vataure vakamirira iwe. Uchapupu hwakakosha kune bhizinesi diki nekuti zvinounza kuvimba uye zvinoita kuti tariro nyowani inzwe kugadzikana.
Kana vatengi vako vakava varidzi vedzimba vanofara, vanogona kutaura zvakanyanya nezvechako. Iwe unofanirwa kuramba uchibatana navo uye kunyange kukurudzira rako rechipupuriro mushandirapamwe. Edza kuisa mavhidhiyo ehupupuriro pawebsite yako webhusaiti kuti vazive mafungiro avo akakosha.
Heino muenzaniso weuchapupu hwakanaka kubva kuYouTube:
Gadziridza Kureba Kwemavhidhiyo Ako
Kunyangwe kureba kwemavhidhiyo ako kunogona kukanganisa zvakanyanya iyo ROI yeako real estate vhidhiyo kushambadzira. Pakazara, vashandisi vezvemagariro vanosarudza mafupi uye anotapira mavhidhiyo. Ndosaka mapfupi vhidhiyo maficha senge Reels kana TikTok ari kuwedzera.
Ehezve, iyo yakakwana vhidhiyo kureba inoenderana neyako indasitiri uye chikuva chauri kugovana pairi. Kutanga, iwe unogona kufunga 2-maminetsi mavhidhiyo yako akakwana vhidhiyo saizi.
Zvakare, unogona kugadzira mavhidhiyo akareba emapuratifomu akaita seYouTube uye IGTV uye wozogovana mapfupi vhezheni emavhidhiyo aya pane mamwe mapuratifomu. Nenzira iyi, unogona kukurudzira vateereri vako kuti vatarise chimiro chako pane mamwe mapuratifomu.
Wongorora Wako Vhidhiyo Kushambadzira Performance
Ramba uchifunga kuti hapana zano rinoramba rakakwana zvachose. Sebhizinesi rezvivakwa diki riri kutanga vhidhiyo kushambadzira, ungangoda kudzokorora zano rako nguva dzese.
Edza kuongorora mashandiro ako uye uwane zvaunokanganisa uye simba rako. Paunotarisa emavhidhiyo akanakisa uye akaipisisa, unogona kukwidziridza ako emangwana mavhidhiyo uye kukwira kumusoro ROI.
Heino muenzaniso wezve analytics zvishandiso pa Twitter:
Mhanya A / B Kuedza
Hazvina mhosva kuti iwe wakanaka sei mukugadzira mavhidhiyo, iwe unofanirwa kuziva kuti ndeupi rudzi rwevhidhiyo, chinyorwa, hashtag, uye zvimwe zvinhu zvakawanda zvinokwezva kune vateereri vako. Kuongorora kweA / B inzira inobatsira kuti unzwisise zvinoitwa nevateereri vako kuzvinhu zvakasiyana mumasocial media / webhusaiti zvinyorwa.
Semuenzaniso, unogona kushandura hashtag yako yeimwe vhidhiyo uye wotumira ese mavhezheni kuteedzera maitiro evateveri vako vezvemagariro kwavari. Iyi yakaratidza kuve nzira yakanaka yekukwiridzira zvinyorwa zvako zvinoenderana nezvinodiwa nevateereri vako.
kuburitsa: Martech Zone yaisanganisira yakabatana link ye Boka moto.
Tags: ab testmuchiso mukurumbiravanhu vazhinjimutengi uchapupu mavhidhiyovatengi zvipupurirohashtagmushakushambadzira kwezvivakwareal estate zvipupuriroreal estate vhidhiyorealtor vhidhiyozvipupuriro mavhidhiyotwitter analyticsvhidhiyo chinyorwakureba kwevhidhiyovhidhiyo kushambadzira